विजेता प्रस्तावहरू शिल्प र उत्पाद बिक्री वृद्धि गर्न प्रभावकारी तरिका के हो?
यदि तपाईं नयाँ बजारमा प्रवेश गर्न वा आफ्नो व्यवसाय विस्तार गर्न चाहानुहुन्छ भने, अमेजन विश्वव्यापी रिटेलिङ प्लेटफर्म तपाईं र तपाईंको व्यवसायिक प्रयोजनका लागि उत्तम अवसर हो। यदि तपाईं आला बारे मा भ्रमित छ जहाँ तपाईं आफ्नो व्यवसाय शुरू गर्न चाहानुहुन्छ वा तपाईंको ईकमर्स साइट बनाउनको लागी पर्याप्त बजेट बनाउने छैन, Amazon.com निश्चित रूपमा तपाईलाई आवश्यक छ। अमेजनले संसारमा एकमात्र ई-वाणिज्य प्लेटफर्म हो जसले अद्भुत व्यावहारिक प्रतिस्पर्धात्मक ज्ञानको अभाव प्रदान गर्दछ। र यसको सबैभन्दा राम्रो भाग यो हो कि तपाइँ यसलाई कम मूल्यको लागि वा निःशुल्कको लागि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ।
यस आलेखमा, हामी कसरी अमेजन लाभहरू कसरी ठीकसँग व्यवस्थापन गर्न छलफल गर्नेछौं र वास्तवमा सिक्ने कुरा के तपाईको बजार चाहानुहुन्छ। तपाईंले उपयोगी सुझावहरू पाउनुहुनेछ कि कसरी तपाईंको शीर्ष बजार आला प्रतिस्पर्धाहरू पहिचान गर्न र तिनीहरूलाई बाहिर आउनु। आशा छ कि हाम्रो सुझावहरू तपाईंलाई अमेजनमा सफल हुन र तपाईंको व्यवसायको समृद्ध बनाउन मद्दत गर्नेछ। त्यसोभए हामी यसमा पुगौं!
अमेजन उत्पाद को बिक्री ट्यूटोरियल
सर्वोत्तम बजार आला को पहिचान गर्नुहोस
तपाईले आफ्नो व्यवसाय विकास गर्न चाहानुहुन्छ भने बजार आला निर्धारण गर्ने तरिका अमेजन सर्वोत्तम बिक्रेता सूची जाँच गर्न चाहानुहुन्छ। यदि तपाईले पहिले नै आफ्नो आचार्य रोज्नुभएको छ भने, तपाइँ आफ्नो लक्षित बजारमा अपील गर्ने कुन उत्पादनहरू र Amazon मा बिक्रीको महत्त्वपूर्ण संख्या उत्पन्न गर्ने सम्भावनाको लागि उत्तम बिक्री जानकारी प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। वस्तुमा क्लिक गर्नाले, तपाइँ कहाँ जाँच्नु भएको यो रैंक र यो कसरी उपभोक्ताहरूको मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ भनेर जाँच्न सक्नुहुन्छ। थप संस्करण प्राप्त गर्न, तपाईं पृष्ठको बायाँ तिर उप-कोटीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। उप-कोटिले चयन गरिएको बजारको बारेमा थप जानकारी दिन सक्छ र तपाईंको लक्षित बजारलाई कम गर्न विचार गर्दछ। यो हुन सक्छ कि तपाइँको आलाको लागि अर्को उप-श्रेणी छैन, तर यो सम्भव छ। Source .यदि होइन भने, सम्बन्धित उप-कोटीहरूमा ध्यान दिनुहोस् किनकि तिनीहरूले तपाईंलाई राम्रो व्यवसाय विचार दिन सक्छन्।
आफ्नो शीर्ष बजार आला प्रतियोगिहरु को पहिचान गर्नुहोस
सर्वोत्तम विक्रेता को खोज गरेर, तपाईं आफ्नो प्राथमिक आला प्रतियोगिहरु लाई पनि पहिचान गर्न सक्छन्। तपाईं Google मा यी ब्रान्डहरू फेला पार्न सक्नुहुन्छ र उनीहरूको उत्पादन प्रस्ताव जाँच गर्न सक्नुहुन्छ। यसबाहेक, तपाईं उनीहरूलाई गोपनीय पसल गर्न सक्नुहुन्छ र उनीहरूको ग्राहक समर्थन सेवाहरू र डिलिवरी समयको गुणस्तर जाँच गर्न आफ्ना उत्पादनहरू खरीद गर्न सक्नुहुन्छ। यसबाहेक, जाँच गर्नुहोस् तपाईको शीर्ष आला प्रतिस्पर्धाहरू अमेजनले अफगानिस्तानको रेजिना upsells र downsells को बारेमा गरिरहेका छन्।
आफ्नो बजार मा बेचने को लागि उपयुक्त उत्पादनहरु को चयन गर्नुहोस
उत्पादनहरू तपाईलाई यसमा बेच्नु पर्छ। यो जानकारी तपाईले बेस्ट बेचेज उत्पादन पृष्ठबाट प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईं उच्च गुणस्तर र कम मूल्य सम्बन्धित उत्पादन पाउन सक्नुहुनेछ। त्यसो गरेर, तपाईं आफ्नो प्रतियोगिहरु लाई आउछ र आफ्नो अमेजन उत्पाद बिक्री लाई बढावा दिन सक्नुहुनेछ।
सुपर उच्च कन्फिगरेसन अप्सल
अन्वेषण अमेजन पत्ता लगाउनुहोस्। तपाईं कुनै पनि परिणामहरू प्रयोगकर्ताहरू प्रदान गर्नु अघि परीक्षण र अनुसन्धानहरूसँग पूर्ण रूपमा यो प्लेटफर्ममा निर्भर रहन सक्नुहुन्छ। त्यसोभए, तपाईलाई आवश्यक पर्ने उत्पादहरूको सर्वोत्तम विक्रेता पृष्ठ हेर्नुहोस् र सूचीबाट सबै भन्दा राम्रो खरिद गरेको वस्तुमा क्लिक गर्नुहोस्। पछ्याउने तीन भागहरूमा उत्पादन फोटोको अधीन हेर्नुहोस्, र तपाईं "प्रायः एकसाथ एकै ठाउँमा खरिद" खण्ड अवलोकन गर्नुहुनेछ, "ग्राहकहरूले यो वस्तु किन्नुभएको पनि खरिद गर्यो" सेक्शन र "यस वस्तुसँग सम्बन्धित प्रायोजित उत्पाद" सेक्शन। यी भागहरू जाँच गर्दै, तपाइँ बहुमूल्य प्रतिस्पर्धी खुफिया जानकारी प्राप्त गर्नुहुनेछ।